समाचार Archives | Page 130 of 131 | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - भरतपुरमा विकासको जस लिन दाहालले के गर्दैछन् ? - page 130
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवालाई चीन र भारतको बधाई
२४ जेठ, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि छिमेकी राष्ट्रहरुले बधाई दिएका छन् । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले हिजो साँझ देउवाको निजी निवास बुढानिलकण्ठमा पुगी प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएकामा उनलाई चिनियाँ सरकारकातर्फबाट शुभकामना व्यक्त गरेको देउवाका सहयोगी भानु देउवाले जानकारी दिए । सो अवसरमा राजदूत होङले नेपाल–चीन सम्बन्धमा थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाको सफल कार्यकालको कामना गरेका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
२३ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार नै संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण दिशामा मुलुक अगाडि बढेको बताएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्दै उनले संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको र त्यसले हिमाल, पहाड र तराईबीचको एकतालाई कायम गरेको बताए ।	थप पढ्नुहोस्
२३ जेठ,सिन्धुली । घुस लिँदै गर्दा आज दुई गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पक्राउ परेका छन् । सोलार जडानका लागि अवैध पैसा लिँदै गर्दा अधिकृतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा गोलन्जोर र फिकल गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृतलाई इलोक्ट्रोनिक्स पसलबाट घुस लिएको अभियोगमा आयोग सम्पर्क कार्यालय बर्दिवासको टोलीले पक्राउ गरेको हो । गोलन्जोरका कार्यकारी अधिकृत भोलाकुमार आलेलाई रु एक लाख ५१ हजार र फिकलका कार्यकारी अधिकृत सतीश भट्टराईलाई रु ९० हजार घुस लिएको आरोप लगाइएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
होमस्टे सञ्चालन गर्न शहरबाट गाउँ फर्किदै लमजुङका गुरुङ
सन्देश पौडेल २३ जेठ,बेसीशहर लमजुङ । पर्यटक आगमन बढेपछि सिउरुङका गाउँले पुनः गाउँ फर्कन थालेका छन् । गाउँमा दैनिक आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चाप बढ्न थालेपछि पर्यटन व्यवसायकै निम्ती शहरबाट गाउँ फर्कनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । गाउँमा पर्यटकको चाप बढेकाले गाउँमै व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले बेसीशहर छोडेर गाउँ फर्किएको सिउरुङकी मिश्रिमाया घलेले बताइन । सिउरुङ घरबास सञ्चालन गर्न गाउँ आएको उनको भनाइ छ ।	थप पढ्नुहोस्
संसदमा प्रमको निर्वाचन हुँदै,देउवा हुने भए ४० औं प्रधानमन्त्री
२३ जेठ।काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् बैठक सञ्चालन गर्न सहमत भएपछि आज प्रधानमन्त्री चयन गर्न निर्वाचन हुँदैछ । प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद् बैठक अपराह्न १ बजेदेखि बसिरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ र संसद् नियमावली, २०७३ को परिच्छेद–९ को दफा ४९ मा प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।	थप पढ्नुहोस्
१७ जेठ, काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको आदेशलाई आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीका बीचमा कार्य विभाजन र सम्पादनमा कुनै समस्या नआओस् भनी आदेश जारी गरिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले नेपाल बहस डटकमलाई जानकारी दिए ।	थप पढ्नुहोस्
यसरी बन्दैछ गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका
१७ जेठ, काठमाडौं । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएका गाउँपालिका र नगरपालिकामा यतिबेला धमाधम कार्यपालिकाको निर्वाचन भइरहेको छ । स्थानीय तहको मन्त्रिपरिषद् मानिने गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन सो गाउँ वा नगरको गाउँसभा र नगरसभाले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । गाउँसभा र नगरसभालाई अर्को शब्दमा निर्वाचक मण्डल पनि भनिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार निर्वाचक मण्डलमा सो गाउँ वा नगरभित्रका अध्यक्ष÷प्रमुख, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्य रहन्छन् ।	थप पढ्नुहोस्
१७ जेठ, काठमाडौं । गत माघमा सम्पन्न पाँचौ लमजुङ महोत्सवबाट बचत भएको रकमबाट करिब रु. चार लाख सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ । महोत्सवबाट कुल नाफा भएको रु ३० लाख ३९ हजारमध्ये तीन लाख ९१ हजार सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरिएको हो । महोत्सव आयोजक लमजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ लमजुङले आज पत्रकार भेटघाट गरी खर्चको बारेमा जानकारी गराएको हो । सङ्घका महासचिव श्रीकृष्ण लामीछानेका अनुसार जिल्लामा रहेको लायन्स सर्वोदय बृद्धाआश्रममा रु २४ हजार ४९८, आदर्श महिला तथा बाल विकास केन्द्रमा रु २४ हजार ४९८ खर्च भएको छ ।	थप पढ्नुहोस्